प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ र बामदेव सल्बलाउन थालेपछि केपी ओलीलाई तनाब !::News from Nepal
प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ र बामदेव सल्बलाउन थालेपछि केपी ओलीलाई तनाब !
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चन्द्रगिरीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेवटर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता खनालले चन्द्रागिरी बैठकका बारेमा कुनै पनि कमिटीमा छलफल नभएको बताए । ‘चन्द्रागिरीमा के भयो मलाई थाहा छैन । यो कार्यशैली ठीक छैन । कमिटीमा छलफल हुन बाँकी छ’, उनले भनेका छन् ।
नेता खनालले आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको बताएका छन् । उनले अर्का वरिष्ठ नेता मधवकुमार नेपालको गुटलाई आफूले साथ नदिएको पनि बताए ।‘म गुट बनाउने कुरामा छैन । गुट बनाउने कुरा अपराध हो । माधव नेपाल, बामदेव गौतम र मेरो गुट छैन’, उनले भने, ‘मेरा आफ्नै स्वतन्त्र विचार हुन्छन् ।
सरकारविरुद्धको मोर्चामा छैन ।’नेकपाका नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चा गठन नभएको बताए । ‘ओलीविरुद्ध कुनै पनि मोर्चा गठन हुने सम्भावना पनि छैन’, उनले भनेका छन् ।
ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कुनै पनि गतिविधि नभएको खनालले बताए । ‘ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेकारको कुरा हो । हल्ला हो । यसको पछाडि नलाग्नुस्’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने कुनै पनि सम्भावना छैन । बिकल्प छैन ।’
पार्टी एकीकरणका बेला ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको गोप्य सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता खनालले बताए । ‘दुई पार्टी बनेका बेला केही सहमति बनेका होलान्’, उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्ने दुई अध्यक्षको कुरा हो ।’प्रचण्डले पार्टी एकीकरणका बेला ओलीसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनको दवाव दिँदै आएका छन् ।
ओली र प्रचण्डका बीच आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ । नेकपाभित्र भएका नेताहरूको गतिविधिबाट ओली जानकार छन् । नेताहरूबीच भएको गुटबन्दीले ओलीलाई तनाब बढादिइएको छ ।ओलीलाई तनाब बढाउनेहरूमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमहरू सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ ।
असार १० गते नेपाल बन्द !
योगेशलाई रोजेको मन्त्रालय !
उपेन्द्र सँगको पुरानो रिस यसरी फेरे गच्छदारले !
पोखरा पुगेर प्रचण्डले खोले गोप्य कुरा, सिंहदरवार तरंगित